Wabiga Jubba oo Fatahaado ka sameeyay Magaalada Baardheere. – SBC
Wabiga Jubba oo Fatahaado ka sameeyay Magaalada Baardheere.
Xili maalmihii ugu dambeeyay ay roobab mahiigaan ah ka da’ayeen qeybo badan oo ka tirsan gobolada Konfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo ayaa wararka laga helayo degmada Baardheere ee gobolkaasi Gedo waxa ay sheegayaan in Fatahaado uu sameeyay wabiga Juba ee mara gudaha Degmadaasi.
Dadka ku dhaqan Magaalada Baardheere oo la hadlay xafiiska SBC International ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in tan iyo xalay ilaa saaka ay da’ayeen Roobab mahiigaan ah, islamarkaana uu fatahaado waaweyn sameeyay wabiga Jubba, waxaanu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka .
Waxaa la arki karay Biyaha wabiga juba oo saaka gaaray xaafado dhowr ah oo ka tirsan Degmada Baardheere, waxaanay dadka deegaanka sheegeen in ay cabsi ka qabaan hadii ay fatahaaduhu sidani ku sii socdaan .
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Da’ayay roobab Mahiigaan ah, waxaana ay dadku ka qaxayeen goobaha ka agdhow wabiga Dhiniciisa, balse waxaa dhacday sidii ay ka baqaqabeen oo aheyd in uu Wabigu sameeyo Fatahaado waaweyn .
Magaalada Baardheere ayaa waxaa dhexmara wabiga Jubba, iyadoona ay tahay Magaalada mid kala qeybisa Buundo taasna waa mida keentay in Biyaha wabiga ay gudaha u galaan xaafadaha magaalada.
Sikastaba ha ahaatee fatahaadahan uu Sameynayo Wabiga Jubba ayaa ay dadku ka muujiyeen cabsi xoogan iyagoona sheegay hadii ay sii socdaan ay u geysankaraan khasaare dhinacyo badan sida in ay dhaliyaan xaaladu caafimaad.